FITSARANA AO IKONGO : Voatendry ny lehiben’ny fonja vaovao taorian’ ny korontana
Miha milamina hatrany ny toe-draharaha ao Ikongo. Manodidina ny iray volana aty aorian’ilay korontana be niseho tany an-toerana dia efa ezahin’ireo tompon’andraikitra averina amin’ny laoniny ny eo anivon’ny tontolon’ny Fitsarana sy ny fonja ao Ikongo. 12 janvier 2018
Tamin’ity herinandro ity no vita ny fanendrena ny lehiben’ny fonja vaovao, izay hisahana ny fitantanana ny fonja ao anatin’ny Distrikan’Ikongo. Tsy ho ela dia handray ny andraikiny ity farany mba hisorohana amin’ny mety hisian’ny gaboraraka eo anivon’ny fonja ary mba hialana amin’ny mety ho fiheverana fa tany tsy misy fanjakana ny ao Ikongo, araka ny fanazavana nomen’ny minisitry ny Fitsarana.
“Manamafy izany ny tenako fa tsy avelan’ny minisitera ho tany tsy misy fanjakana sy tsy misy fitsarana ny any Ikongo. Manan-jo hanana fitsarana sy hotsaraina araka ny lalàna toy ny olom-pirenena rehetra ny mponina any Ikongo, izany no natao mba hanamafisana ny fametrahana ny tany tan-dalàna”, hoy ny minisitry ny fitsarana, Rasolo Elyse Alexandrine. Ankoatr’izay dia mpitandro filaminana 12 lahy ihany koa no nalefa any an-toerana mba hanatevin-draharaha taorian’iny zava-niseho iny. Nanamafy hatrany anefa ny minisitra fa mbola mitohy foana hatramin’izao ny fifampiresahana eo amin’ireo tompon’andraiki-panjakana miaraka amin’ny mponina sy ny olobe ao an-tanàna mba ho fitadiavam-bahaolana ho amin’ny filaminana tanteraka. Raha tsiahivina dia anisany lasibatra tamin’ireny korontana nitranga tany an-toerana ireny ny lehiben’ny fonja, ny tonian’ny mpampano lalàna niaraka tamin’ireo mpiandry fonja sy mpitsara vitsivitsy.
Noho ny hafanan’ny toe-drarahara vokatry ny hatezeran’ireo mponina dia tsy maintsy nandray ny andraikiny faran’izay haingana ny governemanta malagasy tamin’ny fakana an’ireo olon’ny fitsarana izay nandefasana angidimby mba hiakatra aty Antananarivo, anisan’io ilay lehiben’ny fonja teo aloha. Nambaran’ny loharanom-baovao voaray fa tsy maintsy niala tao amin’ny trano fonenany mihitsy ity farany tamin’ny andro nisehoan’ny korontana mba ho fiarovana ny ainy. Amin’izao fotoana izao ihany koa dia anisany mitana ny sain’ireo mpanara-baovao ny mahakasika an’ilay lehilahy voafonja teny Tsiafahy tafatsoaka any Frantsa.
Nambaran’ny minisitra fa efa navoaka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny didy mampisambotra azy. Tsy maintsy naiditra am-ponja ihany koa ireo mpiandry fonja roalahy niaraka tamina mpitsabo mpanampy iray izay nisahana an’i Houcine Arfa fony izy mbola notazomina tany am-ponja.